dopamine D2-receptor binding တွင်အပြောင်းအလဲများသည်လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုတွင်စိတ်ရောဂါကုထုံးအပြီးတွင်လက္ခဏာလျော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
dopamine အတွက်အပြောင်းအလဲများ D2-receptor binding လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (2012) တွင် psychotherapy ပြီးနောက်လက္ခဏာလျှော့ချဖို့ဆက်စပ်နေကြသည်
ကိုးကား: Translational စိတ်ရောဂါကုသမှု (2012) 2, e120; Doi: 10.1038 / tp.2012.40
S Cervenka1, E Hedman1,2, Y ကို Ikoma1,3, D ကို Radu Djurfeldt1, C Rück1, C Halldin1 နှင့် N Lindefors1
2လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ, Integrated ဆေးပညာနှင့်တိုင်းစိတ်ပညာ၏, Karolinska Institute က, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်များအတွက် Osher Center ကဦးစီးဌာန
3မော်လီကျူး Imaging စင်တာ, Radiological သိပ္ပံအမျိုးသားအင်စတီကျု, Chiba, ဂျပန်
စာပေးစာယူ: ဒေါက်တာ S ကို Cervenka, လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, စိတ်ရောဂါကုသမှု, Karolinska Institute က, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Solna, အဆောက်အအုံ R5, 171 76 စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်၏ဌာနခွဲ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လ ၁၉ ရက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ Aprilပြီ ၁၀ ရက်လက်ခံခဲ့သည်
အဆိုပါ dopamine system ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လူနာ striatal dopaminergic အမှတ်အသားများ၏လျော့ချအဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်းမော်လီကျူးပုံရိပ်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (ဝမ်းနည်းဖွယ်) တွင်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍ, ကစားရန်အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်စနစ်ကတိုကျရိုကျနှင့် limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လေ့လာရသေးသည့် dopamine ဝမ်းနည်း၏ pathophysiology အတွက်ဗဟိုဖြစ်အဆိုပြုထား။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အဆင့်ဆင့်ကြောင့် extrastriatal dopamine D2-receptor (D2-R) တွေးဆ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကို အသုံးပြု. သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) ပြီးနောက်လက္ခဏာလျှော့ချခန့်မှန်းမယ်လို့တိုင်းတာ။ ကိုးဝမ်းနည်းလူနာက high-resolution ကိုပေနှင့်အမြင့်ဆှဖှေဲ့ D2-R ကိုရန် radioligand သုံးပြီးလေ့လာခဲ့ကြ [11C]CBT ၏ 457 ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် FLB 15 ။ လက္ခဏာအဆင့်ဆင့် Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး၏စိုးရိမ်ပူပန် subscale (LSAS သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်anx) ။ posttreatment မှာ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကစာရင်းအင်းသိသိသာသာလျှော့ချရေး (ရှိခဲ့P<0.005) ။ covariance ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, LSAS ×အချိန်နှင့်အချိန်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းanx D2-R-binding အလားအလာအပေါ်ပြောင်းလဲမှု (BPND) (ပြသခဲ့ကြသည်P<0.05) ။ တစ် ဦး နောက်ဆက်တွဲဒေသ -by- ဒေသခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ D2-R ကိုပြောင်းလဲမှုအကြားအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုND နှင့် LSASanx ပြောင်းလဲမှု (medial prefrontal cortex နဲ့ hippocampus များအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်P ဤသည်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုနှင့်ဦးနှောက် neurotransmission တစ်အမှတ်အသားပြီးနောက်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးအစီရင်ခံရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တစ်ဦးချင်းနှိုင်းယှဉ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, လေ့လာမှုဝမ်းနည်း၏ pathophysiology အတွက် cortical နှင့် limbic ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် dopamine စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါ dopamine စနစ်ကလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (ဝမ်းနည်းဖွယ်) ၏ pathophysiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍခန့်မှန်း, လူမှုရေးအပြုအမူ, သင်ယူမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ မော်လီကျူးပုံရိပ်လေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအကျူးများနှင့်လူနာများအတွက် postsynaptically နှစ်ဦးစလုံး striatal dopaminergic အမှတ်အသားများ၏လျှော့ချအဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်း, ဒီအယူအဆများအတွက်ပဏာမအကူအညီအထောက်အပံ့များပေးပါပြီ။1, 2,3သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှာလည်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။4 ဒီမကိုက်ညီများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အရှင်ဝေးဖျော်ဖြေသည့်လေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှ (ကပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, ref တွေ့မြင်ဦးနှောက်ကို Activation လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးဝမ်းနည်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုပြသသော limbic သို့မဟုတ် prefrontal ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် dopamine system ကိုလေ့လာကြပြီဖြစ်လိမ့်မည်။ 5) ။ စိတျအပိုငျးတှငျဤကဲ့သို့သော [အဖြစ် radioligands ပထမမျိုးဆက် D2-receptor (D2-R) positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) အဖြစ်ကြောင့်အတိုင်းအတာများန့်အသတ်မှခဲ့သည်11ကို C] raclopride နိမ့်သိပ်သည်းဆ extrastriatal ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိုင်းတာဘို့မလုံလောက်ဆှဖှေဲ့ရှိသည်။
ပေလေ့လာမှုများကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက် dopaminergic အမှတ်အသားများ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်တခုတ်တရအကြားတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြသခဲ့ကြသည်။6 ဤသည်ကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု detect နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်နေပါသည်အဖြစ်လူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ, နှိုင်းယှဉ်တဲ့လေ့လာမှုများအတွက်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ထို့အပွငျ biomarker အဆင့်ဆင့်အတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှုကိုတိုက်ရိုက်ရောဂါလက္ခဏာတွေမှကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လင့်များအခြပါဘူး။ ရောဂါပြည်နယ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု function ကိုထိုအရိုအသေတစ်ဦးထက်ပိုသောအစွမ်းထက်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားနိုင်သကဲ့သို့ဇီဝအမှတ်အသားလေ့လာတွေ့ရှိသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ Psychiatry ခုနှစ်, psychotherapy ၏ထိရောက်သောပုံစံများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိုက်ရိုက်ဦးနှောက်ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲရောဂါလက္ခဏာတွေတိုးတက်လာဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်, သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) အတွက်လူနာအထိ 75% အတွက်လက်တွေ့တိုးတက်မှုစေပါတယ်။7, 8
အကဲဖြတ်အဖြစ်အများအပြားလေ့လာမှုများပေနှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) သုံးပြီးဦးနှောက်ကို Activation အပေါ် psychotherapy ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပေမဲ့, neurotransmission ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အစီရင်ခံစာများရှားပါးလာပြီ။ တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာတစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ်ကုထုံး၏ 12 လအတွင်းပြီးနောက် midbrain အတွက် serotonin သယ်ယူပို့ဆောင် binding ။ အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်မှာပြခဲ့သည်။9 ပေသုံးပြီးနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုနှင့် [11ကို C] နည်းလမ်း-100635, 5HT1a-receptor binding အကျဉ်းဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ် psychotherapy ပြီးနောက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ပြသခဲ့သည်။10 သို့သော်ဤလေ့လာမှုမတစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး biomarker အဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လက္ခဏာတိုးတက်မှုများအကြားပြသနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ, ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ် psychotherapy မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှု striatum အတွက် binding dopamine D2-R ကိုအပေါ်ပြသခဲ့သည်။11 ယနေ့အထိမရှိလေ့လာမှုများဦးနှောက် neurotransmission ၏အမှတ်အသားများအပေါ် CBT ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ CBT စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ကွောကျရှံ့လှုံ့ဆော်မှုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအပေါ်အလေးထားနဲ့အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုဖြစ်သကဲ့သို့ (ဥပမာ, ref ကြည့်ပါ။ 12), psychotherapy ၏ဤပုံစံလက္ခဏာပြောင်းလဲမှု neurobiological ဆက်စပ်မှုဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်ပိုပြီးအလားအလာနေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်မူလတန်းရည်မှန်းချက် CBT ပြီးနောက်လက္ခဏာအဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှုနှင့် dopamine အတွက်အပြောင်းအလဲ D2-R ကိုစညျးအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်တစ်ဦးအကြားတစ်ဦးချင်းနှိုင်းယှဉ်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. ဝမ်းနည်းအတွက် dopamine စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့တိုးလာကြောင်း binding အလားအလာ (BP ဟောကိန်းထုတ်ND) လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်လျှော့စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအထူးဆက်နွယ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို high-ဆှဖှေဲ့ D2-R ကိုရန် radioligand သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည် [11ကို C] FLB 457,13 အရာဝမ်းနည်းများအတွက်အထူးစိတျဝငျစား extrastriatal ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်နှင့်စာမေးပွဲတိုးမြှင့်ခန္ဓာဗေဒတိကျမှုအတွက်တစ်ဦးက high-resolution ကိုသုတေသနပြု tomograph ပေ system ပေါ်တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။14
ဝမ်းနည်းနှင့်အတူကိုးလူနာအုပ်စုတစ်စုကုထုံးနှိုင်းယှဉ်အင်တာနက်မှတဆင့်အုပ်ချုပ် CBT နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ရာ၏ရလဒ်များကိုတခြားနေရာအစီရင်ခံထားပါပြီ။15 ကုသမှုလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောဘာသာရပ်များအကြီးတန်းစိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းများအတွက် DSM IV စံဖြည့်ဆည်းဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်16 DSM-IV ဝင်ရိုးငါမမှန်များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးကိုသုံးနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင် Comorbidity, Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။17 အဆိုပါ PET လေ့လာမှုမှာပါဝင်ပြီးနောက်လူနာကအင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်ကုသမှုကိုဖြစ်စေအဖွဲ့ကို format ကိုသို့မဟုတ်ကုသမှု randomized ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသှေးကိုစမ်းသပ်မှုအဖြစ်တစ်ဦးနှောက် MRI စာမေးပွဲကဆုံးဖြတ်အဖြစ်ဘာသာရပ်များကျန်းမာခဲ့ကြသည်။ သုံးဘာသာရပ်များယခင်က serotonin သို့မဟုတ် serotonin နဲ့ noradrenaline reuptake inhibitors နဲ့ကုသခဲ့သော်လည်းအဘယ်သူမျှလေ့လာမှုရှေ့အပု2လအတွင်းဝမ်းနည်းများအတွက် pharmacological ကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမနီကိုတင်းသည်အသုံးပြုသူများခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာလူနာမဟုတ်ရင်အဘယ်သူမျှမ comorbidity ပစ္စုပ္ပန်ကြီး agoraphobia နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပါထိတ်လန့်ရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံ။ အပိုဆောင်းဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်တွေ့ စားပွဲတင် 1။ အဆိုပါလေ့လာမှု, Karolinska ဆေးရုံ, စတော့ဟုမ်းမှာဒေသဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များသာရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးခြင်းပြီးနောက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ကုသမှုလေ့လာမှုမှာပါဝင် at နှင့်ကုသမှုပြီးနောက်လူနာဆရာအုပ်ချုပ်ခွင့် Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး (LSAS) နဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။18 တူညီသောစကေး (LSAS-SR) ၏တစ်ဦးက Self-rating ဗားရှင်း19 တိုက်ရိုက်မတိုင်မီနှင့်ကုသမှုပြီးနောက်တွင်အင်တာနက်ကနေတဆင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။ LSAS နှစ်ခု subscales, ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတစ်ခုအကွာအဝေးတတိုင်းစိုးရိမ်ပူပန် (LSAS ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်anx) နှင့်အတူတူပင်အခြေအနေများ (LSAS အတွက်ရှောင်ရှားခြင်း၏ဒီဂရီအကဲဖြတ်အခြားကိုရှောင်ကြဉ်) ။ ကျနော်တို့ D2-R ကို binding ကြောင်းတွေးဆအမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်မှအဓိကအား related မည်ဖြစ်ကြောင်း, LSASanx အဓိကအကျိုးစီးပွားရလဒ်ကို variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အတော်ကြာကိစ္စများတွင်လက်တွေ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အပေစာမေးပွဲအကြားအချိန်လပေါင်းများစွာအထိတိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်, အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကုသမှုမီနှင့်အပြီးကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တို့ကဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, သာ LSAS-SR ရမှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ PET1 ရက်ပေါင်း Pre-ကုသမှု ratings မတိုင်မီပျမ်းမျှအား 13 ± 14 (SD ±ဆိုလို) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေနှင့် posttreatment နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပေ2အကြားအချိန် 17 ± 15 ရက်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
သုံးလူနာသိမြင်မှုအမူအကျင့်အုပ်စုတစ်စုကုထုံးကိုလက်ခံရရှိ12 ခြောက်ယောက်လူနာကအင်တာနက်-based CBT ။20 ကုသမှုကြာချိန်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက် 15 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှာအလုပ်ကုသမှုနှစ်ခုစလုံးပေးပို့ပုံစံများဖြင့်တစ်ဦး CBT-မော်ဒယ်ဝမ်းနည်း၏အကြောင်းရင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားအဖြစ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုအပြုအမူတွေအဖြစ်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည်တွင်းအာရုံ၏လွဲမှားစွာအနက်၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးနောက်သို့လိုက်ကြ၏။21, 22 အဆိုပါသီအိုရီအခြေခံနှင့်အဆိုပြုထားယန္တရားများတူညီခဲ့ကြသည်များနှင့်ပစ္စုပ္ပန်နမူနာစုဆောင်းခံခဲ့ရရာမှကုသမှုလေ့လာမှု, ကနေအဓိကတွေ့ရှိချက်, အင်တာနက်-based CBT နှင့်အုပ်စုတစ်စု CBT အထွက်နှုန်းနှင့်ညီမျှကုသမှုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။15 နှစ်ဦးစလုံးပို့ဆောင်မှုကို formats များအတွက်ပြီးစီးခဲ့အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ် module တွေ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်က (; sd = 13 = 15 ဆိုလို) 11.5 ၏ 3.5 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကုသမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုထိတွေ့ခဲ့သည်။
ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောလူနာတစ်ဦး 1T GE Signa Scanner (Milwaukee, WI, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သုံးပြီး T2- နှင့် T1.5 မာန်တင်း MRI စာမေးပွဲဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ T2 ပုံရိပ်ကို macroscopic ရောဂါဗေဒများအတွက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ပါသည်, ထို T1 ပုံရိပ်ကိုနောက်ဆက်တွဲ image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ radioligand [11ကို C] FLB457 0.02 ၏ဆှဖှေဲ့နဲ့အစားထိုး benzamide ဖြစ်ပါသည် nmol l-1 D2 နှင့် D3 dopamine receptors များအတွက် စသည်တို့အတွက်, ရာထက်သိသိသာသာမြင့်မား [11ကို C] raclopride (1-2 nmol l-1).13 ဒါဟာဝိသေသ D2-R ကိုထုအနိမ့်များမှာဘယ်မှာ extrastriatal ဦးနှောက်ဒေသစာမေးပွဲဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ [11ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, C] FLB457 ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။23 PET1 နှင့် PET2 များအတွက်ထိုးသွင်းထိုး 468 ± 16 နှင့် 465 ± 19 ခဲ့သည် အသီးသီး MBq ။ ထိုးသွင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ, တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စုစုပေါင်းဒြပ်ထုအဘို့အအသီးသီးတဦးတည်း PET1 နှင့်တစ် PET2 အဘို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောစာမေးပွဲအဘို့, ပျမ်းမျှတိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု 1436 ± 2348 နှင့် 658 ± 583 ခဲ့သည် GBq μmol-1 PET1 နှင့် PET2 အဘို့နှင့်ထိုးသွင်း FLB 457 ၏ဒြပ်ထု 0.41 ± 0.3 နှင့် 0.58 ± 0.6 ခဲ့သည် အသီးသီးμg။ အဆိုပါထိုးထိုး, တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက် (အကျူးများနှင့် posttreatment အကြားကွဲပြားဘူးP> 0.5, တွဲ t-test) နှင့်အရေးကြီးထိုးသွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ဖြစ်စေ, BP အကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ND သို့မဟုတ်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှု။
ပေစာမေးပွဲ high-resolution ကိုသုတေသနပြု tomograph စနစ် (Siemens Molecular Imaging, နို့ဗိုင်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးပေစာမေးပွဲမတိုင်မှီတစ်ဦးအင်္ဂတေသံခမောက်လုံးတိုင်းတာကာလအတွင်းဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချဖို့တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ PET1 နှင့် PET2 အကြားအချိန် 146 ± 23 ရက်နေ၏။ ပေ 12 နှင့် 24 များအတွက် 1: PET11 များအတွက် 53 ဆေးထိုးဘို့ပျမ်းမျှအချိန်2ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်လွှတ်ခြင်းမပြုမီ, တစ်ဦး 5-မိဂီယာစကင်ကို attenuation နှင့်ကြဲဖြန့်များအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ [11တစ်ဦး bolus ထိုးခြင်းနှင့်ရေဒီယိုသတ္တုကြွ 457 များအတွက်တိုင်းတာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကို C] FLB 87 အဆိုပါ antecubital သွေးကြောထဲမှာထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် မိ။ နှစ်ခုဘာသာရပ်များအဘို့, ဒုတိယစာမေးပွဲ 910 နှင့် 1416 အကြားကြားဖြတ်ခဲ့သည် s နှင့် 3361 နှင့် 3623 အသီးသီး s ကို။ ဤရွေ့ကားကြားကာလနောက်ဆက်တွဲ kinetic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေသုံးရှုထောင် 1.5 တစ်ခု In-လေယာဉ် resolution ကိုအတွက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော, အမှတ်ပျံ့နှံ့ function ကို algorithm ကိုအပါအဝင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်မျှော်လင့်လုပျသငျအမိန့်ဟာသာမန် Poisson သုံးပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် လယ်ပြင်-of view ၏အလယ်ဗဟိုမှာဝက်အများဆုံးမှာမီလီမီတာ။14
ပေပုံရိပ်တွေတစ်ဦးသည် frame-by-frame ကိုရှိမယ်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုပြီးဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုအဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်,24 လာမယ့်တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်အမှုဆောင် image ကိုအသီးအသီးဘောင်နှင့်အတူ။ posterior commissure လေယာဉ် - T1 MR ပုံတွေကို anterior commissure မှ realigned ခဲ့ကြသည်။ အကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏နေရာများကို manually လူ့ဦးနှောက် Atlas software ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက် MRI အပေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်25 (ပုံ 1) ။ ရှေးခယျြသောနေရာများ, ဝမ်းနည်း၌မိမိတို့အဆိုပြုထားသောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်အခြေခံပြီး, amygdala, hippocampus နှင့် prefrontal cortical ခဲ့ကြသည်5 နှင့် ROIs ယခင်ကထုတ်ဝေလမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြု. သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။26, 27 အဆိုပါ prefrontal cortex dorsolateral, medial နှင့် orbitofrontal ဒေသများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်။27 Striatal ဒေသများ [၏မြင့်ဆှဖှေဲ့အဖြစ်အကဲဖြတ်ကြသည်မဟုတ်11ကို C] FLB 457 အရှင် binding radioligand ၏အဓိပ္ပာယ်ပြည့်တွက်ချက်မှုတားဆီးတစ်ပေစမ်းသပ်မှု၏ဘောင်အတွင်း equilibrium ဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။28 MRIs မီးခိုးရောင်ကိစ္စ, အဖြူရောင်ကိစ္စနှင့် cerebrospinal fluid သို့ segmented နှင့် SPM5 သုံးပြီးနှစ်ခုပေပုံရိပ်တွေ၏တစ်ဦးချင်းစီမှ coregistered ခဲ့ကြသည်။ ရရှိသောအသွင်ပြောင်း parameters တွေကိုအချိန်လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ် (TACs) generate မှနောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါပြောင်းလဲနေသောပေပုံရိပ်တွေအပေါ် ROIs လျှောက်ထားရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိုကျရိုကျ cortical ဒေသများများအတွက်သာမီးခိုးရောင်ကိစ္စ segment ကိုမှပိုင်ဆိုင် voxels သည့်ရွယ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Meltzer နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတစိတ်တပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးမခြင်းအိမ်နီးချင်း CSF voxels ထံမှသက်ရောက်မှု smearing ရှောင်ရှားရန်, ဤဒေသများလျှောက်ထားခဲ့သည်။29 image processing SPM5 Matlab R2007b (MathWorks, Natick MA, USA) အပေါ် operating အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
(a-c) amygdala များအတွက်အကျိုးစီးပွားဒေသများနှင့်အတူသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေ (အနီ), hippocampus (အဝါရောင်), dorsolateral prefrontal cortex (စိမ်းပြာရောင်), medial prefrontal cortex (အပြာ) နှင့် orbitofrontal cortex (အစိမ်းရောင်) ။ (d-f၏) ချုပ်ဖော်ပြပုံရိပ်တွေ [11ကို C] FLB (နောက်ထပ် …)
BPND ရည်ညွှန်းအဖြစ် cerebellum နှင့်တကွ, ရိုးရှင်းသောရည်ညွှန်းတစ်ရှူးမော်ဒယ် (SRTM) ကို အသုံးပြု. TACs ကနေတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်, ကို BP အတွက်ND တစ်သျှူးအတွင်း nondisplaceable radioligand ၏ရန်အထူးခညျြနှောငျ radioligand ၏ equilibrium မှာအချိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။30 အဆိုပါ SRTM ယခင်က [ဘို့အတည်ပြုထားပြီး11ကို C] FLB 457 ။28 ကျွန်တော်ဝမ်းနည်း, ကို BP အတွက် dopaminergic neurotransmission များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်ဘေးထွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိအယူအဆခဲ့ကတည်းကND အားလုံးဒေသများများအတွက် tac စာရင်းဇယားတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ၌တရားနှင့်လက်ဝဲဘက်နှစ်ဖက်အဘို့အ Spatial ပျမ်းမျှ TACs အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်။
LSAS ရမှတ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် D2-R ကို BPND တစ်စုံသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t-test ။ D2-R ကို BP အကြားအသင်းအဖွဲ့များND နှင့်အခြေခံမှာ LSAS ရမှတ်အသက်အရွယ်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထား, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ binding ဒေသဆိုင်ရာ D2-R ပြောင်းလဲမှုများနှင့် LSAS ပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်ဆံရေးanx ရမှတ်များအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များနှင့် LSAS အဖြစ်အချိန်နှင့်ဒေသနှင့်အတူ, covariance တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်anx တစ်ဦး covariate အဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းလဲမှု။ secondary ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း LSAS များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကိုရှောင်ကြဉ် ထိုသူနှစ်ယောက် subscales ပေါင်းစပ်။ ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင်ဆက်စပ်မှုကိန်း D2 ကို BP အတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအကြားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်ND LSAS နှင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲanx ရမှတ်များ။ တစ်ဦးအတွက် Post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, တစ်ဦးချင်းစီ (နခွဲခြားခဲ့သည် 50% လက္ခဏာလျှော့ချရေး) နှင့် Non-တုံ့ပြန်ပြီးကို BP အတွက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှုND တန်ဖိုးများကိုကှဲလှဲ၏တစ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်, ရလဒ်များကိုမှာသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ P<0.05 ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း PASW 18 (SPSS, Chicago, IL, USA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် D2-R ကို BPND
အားလုံးလူနာကုသမှုပြီးနောက်တိုးတက်နှင့်စုစုပေါင်း LSAS ရမှတ်အဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း subscales အတွက်အပြောင်းအလဲ (ကစာရင်းအင်းသိသာခဲ့သည်စားပွဲတင် 2) ။ အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်ကုသအုပ်စုတစ်စုကုထုံးနှင့်လူနာလက်ခံရရှိလူနာအကြား LSAS ပြောင်းလဲမှုမရှိခြားနားချက်တပြင်လုံးကိုစကေးအဘို့သို့မဟုတ် subscales အဘို့ဖြစ်စေ, ရှိခဲ့သည် (P> 0.74) ။ ကုသမှုခံယူပြီးချိန်တွင် (၄၄%) ပါ ၀ င်သူများသည် SAD အတွက်ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီတော့ပါ။ အုပ်စုအဆင့်တွင် D44-R-binding စည်းနှောင်မှုမတိုင်မီနှင့်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကွာခြားချက်သည်တွဲဖက် အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းမည်သည့်ဒေသများအတွက်မဆိုစာရင်းအင်းအရအရေးပါမှုကိုမရရှိခဲ့ပါ။ t(-testစားပွဲတင် 2) ။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှု၏ညှနျကွားနှင့်ဒီဂရီလက္ခဏာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်စပ်မှု၏တွက်ချက်မှု enabled သောစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ interindividual အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, ပြသခဲ့သည်။
D2-receptor-binding အလားအလာများနှင့်လက္ခဏာရမှတ်အကျူးများနှင့် posttreatment
D2-R ကို BP အကြားအသင်းအဖွဲ့များND ပြောင်းလဲမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်အပြောင်းအလဲ
covariance ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, လက္ခဏာရမှတ်ပြောင်းလဲမှု×အချိန်နှင့်အချိန်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများ LSAS များအတွက်ပြသခဲ့ကြသည်anx (က F, 7.61 = P= 0.028 နှင့် F = 7.77, P= 0.027) ။ D2-R ကို BP အတွက်ပြောင်းလဲမှုအကြားနောက်ဆက်တွဲဒေသ-by-ဒေသခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုND နှင့် LSASanx ပြောင်းလဲမှု (dorsolateral prefrontal cortex များအတွက်ပြသခဲ့ကြသည်r= -0.78, P= 0.013), medial prefrontal cortex (r= -0.82, P= 0.007) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် hippocampus များအတွက် (r= -0.81, P= 0.008; ပုံ 2) ။ medial prefrontal cortex နဲ့ hippocampus အတွက်ဆက်စပ်မှု Bonferroni ဆုံးမခြင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ် (ချိန်ညှိ P-value <0.01) ။ ဤဒေသများရှိတုံ့ပြန်သူများသည်စည်းနှောင်မှုတိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည် (၅.၀% နှင့် ၉.၅% အသီးသီးရှိသည်။ ) n= 4), ပျမ်းမျှ Non-နတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း (-8.6% နှင့် -8.3%, ပြသသော်လည်း n= 5) ။ တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုအနည်းငယ်တစ်ဦးချင်းစီနေသော်လည်း, ဒီခြားနားချက် (MFC များအတွက်သိသာခဲ့သည်P= 0.003) နှင့် hippocampus များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်-Level သိသာထင်ရှားသော (P= 0.097) ။ အဆိုပါရှောင်ရှားခြင်း subscale အပေါ်အချိန်သို့မဟုတ်အချိန်×လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုမျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ covariate အဖြစ်နှစ်ခုအကြေးခွံပေါင်းစပ်ပြီးသည့်အခါ subscales အကြားသက်ရောက်မှု၏ဤခြားနားချက်ကိုလည်းကြောင်းတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့လမ်းကြောင်းသစ်-Level သက်ရောက်မှု, F ကို = 3.93 (အချိန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် P= 0.088) နှင့်ပြောင်းလဲမှု×အချိန်များအတွက်အပြန်အလှန်သက်တမ်း (F ကို = 3.74, P= 0.095) ။
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), medial prefrontal cortex (MFC) နှင့် hippocampus (HIP) တွင် Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေးအတွက်အပြောင်းအလဲ (LSAS) စိုးရိမ်ပူပန်ရမှတ်များနှင့် dopamine အလားအလာ D2-receptor-binding (BP) အကြားဆက်ဆံရေးကိုညွှန်ပြ Scatterplots ။ (နောက်ထပ် …)
D2-R ကို BP အကြားအကျူးများနှင့် posttreatment ဆက်စပ်မှုND နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်
D2-R ကို BP အကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်ND နှင့် LSASanx သို့မဟုတ် LSASကိုရှောင်ကြဉ် ရမှတ်များအသက်အရွယ်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်, အကျူးသို့မဟုတ် posttreatment ။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ CBT ပြီးနောက်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ် binding dopamine D2-R ပြောင်းလဲမှုများဆန်းစစ်အသုံးပြုပုံဝမ်းနည်းအတွက် extrastriatal dopamine စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်။ အရေးကြီးတာက, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဤထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝငျမယ်လို့အဖြစ်, D2-R ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်အတွက် binding အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, CBT Non-pharmacologically ရောဂါပြည်နယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန် tool အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အဲဒီ receptor အတွက်လက္ခဏာရမှတ်များနှင့်အပြောင်းအလဲများအတွက်ပြောင်းလဲမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ binding မဟုတ်ဘဲအုပ်စုတစ်ခုအဆင့်တွင်အကျူးများနှင့် posttreatment အပြောင်းအလဲများကိုထက်အဓိကရလဒ်ပါပဲ။ ထို့ကြောင့် PET1 နှင့် PET2 အကြားပျမ်းမျှခြားနားချက် [ဘို့ယခင်ကပြသစမ်းသပ်-retest အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအတွင်းခဲ့သော်လည်း11ကို C] FLB 457,31 ပြောင်းလဲမှုအတွက် interindividual အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, D1-receptor ပြောင်းလဲမှုများ binding မကြာသေးမီကမှတ်ဥာဏ်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အလုပ်လုပ်အတွက်တိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပြသခံခဲ့ရ,32 ယခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဦးနှောက် neurotransmission တစ်အမှတ်အသားအတွက် psychotherapy နှင့်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်လက္ခဏာလျှော့ချရေးအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသရုပ်ပြပါ။
လူမှုရေးအပြုအမူအတွက် dopamine စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍတိရိစ္ဆာန်သုတေသနနှင့်လူ့လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ မော်လီကျူးပုံရိပ်လေ့လာမှုများ striatal DA အမှတ်အသားများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုငျးကှာအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအဖြစ်လူမှုရေးညီညွတ်မှုနှင့်အနိမ့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံများပြသထားပါပြီ။33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 တိုင်းတာအဖြစ်မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့သုံးပြီး medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက် binding လူမှုရေးလိုလားနှင့် D2-R ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုသရုပ်ပြသုတေသန၏ဤလိုင်းတိုးချဲ့ [11ကို C] FLB 457 ။40 အဆိုပါလူ့ဒိုမိန်းအတွက်အဲဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များလူမှုရေးကြီးစိုးဆန့်ကျင်အဖြစ်လူမှုရေးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ညွှန်ပြမှကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်,40 နှင့်ရလဒ်များကိုအရှင် dopaminergic neurotransmission ကြီးစိုး-လကျအောကျခံအပြုအမူများ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘယ်မှာကြွက်နှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများအပေါ်သုတေသနပြု mirror ။41, 42, 43, 44 အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား Morgan ကလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် et al ။,44 D2-R ကိုမျောက်အတွက် binding ရှိရာတိရိစ္ဆာန်များတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်လူမှုရေးအိုးအိမ်မှပြောင်းရွှေ့အဖြစ် hierarchical ရာထူးတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြသခဲ့သည်။ D2-R ကို binding နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာအတွက်ပြောင်းလဲမှုအကြားဆက်ဆံရေးများ၏လေ့လာရေးသုတေသနဤလိုင်းများနှင့်အတူအရတော့သည်နှင့်လူ့အပြုအမူနှင့်ညှိုးငယ်များ၏ကြီးစိုး-လကျအောကျခံအတိုင်းအတာအကြားတစ်ဦးကအကြံပြု link ကိုအထောက်အပံ့အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။45 အဆိုပါဆက်စပ်မှု LSAS များအတွက်သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်ခဲ့ကိုရှောင်ကြဉ်ရှားလော့အပြုအမူများပိုမိုသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသဘာဝအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအရာ။ ဥပမာ, ထိန်းသိမ်းထားဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြုအမူတွေနှင့်အတူလျှော့ရှောင်ရှားခြင်းလျော့နည်းစိုးရိမ်စိတ်လိုက်လျောမည်ဟုမျှော်လင့်မထားပါ။21
SPECT လေ့လာမှုများယခင်ကဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်ဘာသာရပ်များထိန်းချုပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင် comorbid OCD နှင့်အတူ2တစ်နမူနာထဲမှာအတူ 10 လူနာအတွက် striatum အတွက် binding လျှော့ချ dopamine D7-R ကိုပြသခဲ့ကြသည်။1,2အဆိုပါ presynaptic ခြမ်းတွင်, binding အောက်ပိုင်း dopamine Transporter 11 လူနာအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။3 ပေသုံးပြီးတစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုမှာမရှိခြားနားချက် (အခြေခံမှာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်ဖြစ်စေ, D2-R ကိုရရှိနိုင်မှုမှာပြသဖြင့်, dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ခညျြနှောမကွာခြားချက်လည်းခဲ့သည်nအသီးသီး = 15, 12 နှင့် 12,) ။4 သို့သော်ဤလေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှ extrastriatal ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine receptors အကဲဖြတ်။
ဦးနှောက်ကို Activation လေ့လာမှုများများတွင်အများဆုံးပွားတွေ့ရှိချက်တွေထဲကကြောက်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် amygdala အတွက် activation တိုးပွါး46, 47, 48 ဒါပေမယ့်အထူးသ, အနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။49, 50 ဝမ်းနည်းအတွက်ပြောင်းလဲ activation ဖေါ်ပြခြင်းအခြားဒေသများ hippocampal နှင့် prefrontal cortical ပါဝင်သည်။5, 46, 47, 51, 52, 53 အဆိုပါ medial prefrontal cortex များအတွက်အထူးလူမှုရေးအကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဝမ်းနည်းလူနာမှာပြထားပြီး51, 52 နှင့်ဤဒေသကိုလည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။54, 55 အဆိုပါ hippocampus အတွက် Dopaminergic ဂီယာတိရိစ္ဆာန်သုတေသန၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်မော်လီကျူးပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်မှတ်ဉာဏ် function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုပြသထားသည်။56, 57, 58, 59 အတူတူယူ dopaminergic hippocampus အတွက် function ကိုနှင့် prefrontal cortical ဒေသများအကြားဆက်စပ်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်သင်ယူမှုနှင့်လူမှုရေးအကဲဖြတ်တွင်ဤဒေသများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကန့်အသတ်ငယ်လေးနမူနာအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ 126 လူနာတစ်ဦးစုစုပေါင်းကုသမှုလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြပေမဲ့,15 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုငါတို့သည် concomitant pharmacological ကုသမှုသို့မဟုတ်နီကိုတင်း၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ဥပမာ, D2-R ကိုရရှိနိုင်မှုအပေါ်သဖွငျ့ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးတင်းကျပ်ပါဝင်စံလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ထို့ပြင်အချို့သောလူနာအချိန်တန်သတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအနေကျနော်တို့ကို BP အတွက်ရှိမရှိပြောင်းလဲမှုများမဆုံးဖြတ်နိုင်ND ဤအ parameters တွေကိုတစ်ခုတည်းပေတိုင်းတာခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး dissociated မရနိုင်အဖြစ်, အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်သိသာဆှဖှေဲ့ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။30 သိသာဆှဖှေဲ့လွှမ်းမိုးအချက်များအနက် endogenous dopamine အဆင့်ဆင့် [ထိခိုက်ပြခဲ့ကြ11ကို C] FLB 457 binding,60, 61, 62 သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပြီ။63, 64 neurotransmitter အဆင့်ဆင့်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်များမှာဘယ်မှာကြွက်၌တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။65, 66 လေ့လာမှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောတိကျသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမျိုးစုံပေစာမေးပွဲအလုပ်သမားဖြစ်သော်လည်း [11ကို C] FLB 457 ကို BP အတွက်ကှဲလှဲအများစုအဘို့အကြောင်းအဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအကောင့်ပြခဲ့ကြND,67 က endogenous dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဥပမာအားဖြင့်ကုသမှုပြီးနောက်ပြောင်တိုးတက်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်စာမေးပွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မား DA reactivity ကိုထင်ဟပ်ဘို့, လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အသင်းအဖွဲ့များအဘို့အတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကောင့်နိုင်ကြောင်းဖယ်ထုတ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီပဏာမလေ့လာမှုကနေရလဒ်များ dopamine စနစ်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကို CBT နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်ဝမ်းနည်းလူနာလျှော့ချစိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေအခြေခံစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဝမ်းနည်းဖွယ်အတွက် dopamine စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်နှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တစ်ဦးချင်းနှိုင်းယှဉ်စိတ်ရောဂါမမှန်အဘို့အဦးနှောက် biomarkers ဖော်ထုတ်အတွက်အလားအလာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုSöderströmKönigska Stiftelsen, ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးအမျိုးသားဘုတ်အဖွဲ့, စတော့ဟုမ်းကောင်တီကောင်စီနှင့် Psykiatrifonden ကထောက်ခံခဲ့သည်။ , Karolinska ပေရေးစင်တာမှာ, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Huddinge မှာအင်တာနက်ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုယူနစ်မှာဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်စရာအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
Schneier FR, Liebowitz MR, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Zea-ပှနျး Y ကို, လင်း SH, Laruelle အမ်အင် dopamine: D (2) လူမှုရေး phobia အတွက်အဲဒီ receptor binding အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;157: 457-459 ။ [PubMed]
Schneier FR, Martinez: D, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, et al Zea-ပှနျး Y ကို, Simpson HB, Liebowitz MR ။ Striatal dopamine: D (2) comorbid လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်မပါဘဲ OCD အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ။ 2008;25: 1-7 ။ [PubMed]
Tiihonen J ကို, Kuikka J ကို, Bergstrom K ကို Lepola ဦး, Koponen H ကို, Leinonen အီး Dopamine reuptake site ကိုလူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက် densities ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;154: 239-242 ။ [PubMed]
Schneier FR, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Martinez: D, Slifstein M က, Hwang DR, Liebowitz MR, et al ။ Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, D2 receptors, နှင့်အထွေထွေလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ။ 2009;26: 411-418 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Freitas-Ferrari ပြိုင်ကား MC, Hallak JEC, Trzesniak ကို C, Filho AS, et al Machado-de-Sousa JP, ဆိုရင်ရှာဂါ MHN ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက် Neuroimaging: စာပေတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;34: 565-580 ။ [PubMed]
Farde L ကို, ခန်းမ H ကို, Pauli S က, Halldin C. variable D2-dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ဆှဖှေဲ့အတွက်: လူကို [11C] raclopride နှင့်အတူတစ်ပေလေ့လာမှု။ synapses ။ 1995;20: 200-208 ။ [PubMed]
Fedoroff IC, တေလာအက်စ်စိတ်ဓာတ်နှင့်လူမှုရေး phobia ၏ pharmacological ကုသ: တစ် Meta-analysis သည်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2001;21: 311-324 ။ [PubMed]
Jørstad-Stein EC, Heimberg RG ။ လူမှု phobia: ကုသမှုတခုတခုအပေါ်မှာ update ကို။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2009;32: 641-663 ။ [PubMed]
Lehto သည် SM, Tolmunen T က, Joensuu M က, Saarinen PI, Valkonen-Korhonen M က, Vanninen R ကို, et al ။ psychotherapy ၏တစ်နှစ်အကြာတွင် atypically စိတ်ဓာတ်ဘာသာရပ်များအတွက် midbrain serotonin Transporter ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;32: 229-237 ။ [PubMed]
Karlsson H ကို, Hirvonen J ကို, Kajander J ကို, Markkula J ကို, Rasi-Hakala H ကို, Salminen JK, et al ။ သုတေသနစာတစ်စောင်: Psychotherapy အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ဦးနှောက် serotonin 5-HT1A receptors တိုးပွားစေပါသည်။ Psychol Med ။ 2010;40: 523-528 ။ [PubMed]
Hirvonen J ကို, Hietala J ကို, Kajander J ကို, Markkula J ကို, Rasi-Hakala H ကို, Salminen J ကို, et al ။ [2C] raclopride ပေနှင့်အတူလေ့လာခဲ့သည့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် striatal နှင့် thalamic dopamine D3 / 11 receptors အပေါ်လက္ခဏာမူးယစ်ဆေးကုသမှုနှင့် psychotherapy ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010;25: 1329-1336 ။ [PubMed]
Heimberg RG, Becker က RE ။ လူမှု Phobia များအတွက်သိမှု-အပြုအမူ Group မှကုထုံး: အခြေခံပညာယန္တရားများနှင့်လက်တွေ့မဟာဗျူဟာ။ Guilford စာနယ်ဇင်း: နယူးယောက်; 2002 ။
Halldin ကို C, Farde L ကို, Hogberg T က, Mohell N ကို, ခန်းမ H ကို, Suhara T က, et al ။ ကာဗွန်-11-FLB 457: extrastriatal D2 dopamine receptors များအတွက် radioligand ။ J ကို Nucl Med ။ 1995;36: 1275-1281 ။ [PubMed]
အဆိုပါ HRRT နှင့်အတူ 3D-OP-OSEM အချက်ပြန့်ပွား function ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို အသုံးပြု. Varrone တစ်ဦးက, Sjoholm N ကို, Eriksson L ကို, Gulyas B, Halldin ကို C, Farde အယ်လ်တိုးပေအရေအတွက်ပါ။ EUR J ကို Nucl Med Mol Imaging က။ 2009;36: 1639-1650 ။ [PubMed]
Hedman အီး, Andersson, G, Ljótsson B, Andersson အီး, Rückကို C, Mörtbergအီး, et al ။ သိမြင်မှုအမူအကျင့်အုပ်စုတစ်စု vs. အင်တာနက်အခြေပြုသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအတွက်ကုထုံး: တစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားသည် non-ညံ့လို့ရုံးတင်စစ်ဆေး. PLoS ONE ။ 2011;6: e18001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ယား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: DSM-IV-TR ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအရက်ဆိုင်: ဝါရှင်တန်ဒီစီ; 2000 ။
Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, Weiller အီး, et al ။ Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတည်ပြု J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998 ။ 59(ပျော့ပျောင်း 2022-33.33quiz 34-57 ။ [PubMed]
Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR, Safren လုပ် SA, Brown က EJ, Schneier FR, et al ။ အဆိုပါ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychol Med ။ 1999;29: 199-212 ။ [PubMed]
နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများ DM, Cole ME, Heimberg RG, Liebowitz MR, Hami S က, Stein ကို MB, et al ။ အဆိုပါ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး: အ Self-အစီရင်ခံစာ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆရာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရကို formats တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။ Psychol Med ။ 2001;31: 1025-1035 ။ [PubMed]
Andersson, G, Carlbring P ကို, Holmströmတစ်ဦးက, et al Sparthan အီး, Furmark T က, Nilsson-Ihrfelt အီး။ ကုထုံးတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကို-based Self-အကူအညီနှငျ့ Vivo အတွက် လူမှုရေး phobia ဘို့အုပ်စုတစ်စုထိတွေ့: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 2006;74: 677-686 ။ [PubMed]
Clark က DM, ဝဲလ်အေ လူမှု Phobia ၏တစ်ဦးကသိမှုမော်ဒယ်ခုနှစ်တွင်: Heimberg RG, Leibowitz M က, မျှော်လင့်ခြင်း DA, Schneider FR, (eds) ။ အခန်းကြီး4။ Guilford စာနယ်ဇင်း: နယူးယောက်; 1995 ။
မုဒိမ်းမှု RM, Heimberg RG ။ လူမှုရေး phobia အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏တစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်။ Res Ther ပြုမူနေ။ 1997;35: 741-756 ။ [PubMed]
Sandell J ကို, Langer အို Larsen P ကို, အရုပ်က F, Vaufrey က F, Demphel S က, et al ။ အဆိုပါ GE ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ PETtrace Mei MicroLab အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပေ radioligand [11C] FLB 457 ၏တိုးတက်တိကျတဲ့ရေဒီယိုသတ္တုကြွ။ J ကို comp Radiopharm ကပ်ထားပါတယ်။ 2000;43: 331-338 ။
Montgomery AJ, Thielemans K ကိုထာ MA, Turkheimer က F, Mustafovic S က, Grasby pm တွင်။ ပေလေ့လာမှုများအပေါ်ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှု၏ဆုံးမပဲ့ပြင်: နည်းလမ်းများ၏နှိုင်းယှဉ်။ J ကို Nucl Med ။ 2006;47: 1936-1944 ။ [PubMed]
Roland PE, Graufelds CJ, Wåhlin J ကို, Ingelman L ကို, Andersson က M, Ledberg တစ်ဦးက, et al ။ high resolution ကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒမြေပုံများအတွက်လူ့ဦးနှောက် Atlas ။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 1994;1: 173-184 ။
Pruessner JC, Li က LM, Serles W က, Pruessner M က, Collins က DL, Kabani N ကို, et al ။ high-resolution MRI နှင့်သုံးရှုထောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ hippocampus နှင့် amygdala ၏ Volumetry: ဓာတ်ခွဲခန်းအကြားကွာခြားချက်များအသေးအဖွဲ။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 433-442 ။ [PubMed]
ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Mawlawi အို Lombardo ငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Gil R ကို, Martinez: D, Huang က Y ကို, et al ။ Prefrontal dopamine D1 receptors နှင့် schizophrenia အတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 3708-3719 ။ [PubMed]
Olsson H ကို, Halldin ကို C, Swahn CG [11C] FLB 457 ၏ Farde အယ်လ်အရေအတွက်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine receptors extrastriatal မှ binding ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1999;19: 1164-1173 ။ [PubMed]
Meltzer CC ကို, Leal JP, Mayberg HS, Wagner HN, Jr, Frost က JJ ။ MR ပုံရိပ်အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက် cortex အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပေအချက်အလက်များ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်။ J ကို Tomogr Assist computing ။ 1990;14: 561-570 ။ [PubMed]
Innis RB, Cunningham VJ, Delforge J ကို, Fujita က M, Gjedde တစ်ဦးက, ဂွန် RN, et al ။ အဘို့အများသဘောတူညီမှု nomenclature Vivo အတွက် reversibly စည်းနှောင် radioligands ၏ပုံရိပ်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 2007;27: 1533-1539 ။ [PubMed]
Narendran R ကို, Mason ဆို NS, မေလ, MA, Chen က CM, Kendro S က, Ridler K သည်, et al ။ [အတူလူ့ cortex အတွက် dopamine: D / receptors ၏ Positron ထုတ်လွှတ် tomography ပုံရိပ်11ကို C] FLB 457: reproducibility လေ့လာမှုများ။ synapses ။ 2011;65: 35-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al McNab က F, Varrone တစ်ဦးက, Farde L ကို, Jucaite တစ်ဦးက, Bystritsky P ကို, Forssberg H ကို။ cortical dopamine D1 အဲဒီ receptor အတွက်အပြောင်းအလဲများသိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဆက်စပ် binding ။ သိပ္ပံ။ 2009;323: 800-802 ။ [PubMed]
Farde L ကို, Gustavsson JP, Jönssonအီး D2 dopamine receptors နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ သဘာဝ။ 1997;385: 590 ။ [PubMed]
ရိဗ် SJ, ထာ, MA, et al Montgomery AJ, Amiras: D, Egerton တစ်ဦးက, Howard RJ ။ Striatal dopamine (D2) အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတုံ့ပြန်လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuroimage ။ 2007;34: 1782-1789 ။ [PubMed]
Huang က CL, ယန် YK, Chu CL, Lee က ih, Yeh TL, Chen က PS, et al ။ အဆိုပါ Maudsley ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစာရင်းနှင့်ကျန်းမာတရုတ်အသိုင်းအဝိုင်းဘာသာရပ်များ၏ striatal dopamine D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏မုသားစကေးအကြားအသင်းအဖွဲ့။ EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;21: 62-65 ။ [PubMed]
Egerton တစ်ဦးက, Rees အီး, Bose ကို SK ကို, Lappin JM, Stokes PRA, Turkheimer FE, et al ။ အမှန်တရား, မုသာစကားကိုသို့မဟုတ် Self-ပရိယာယ်? Striatal: D (2 / 3) အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုလူမှုရေးညီတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuroimage ။ 2010;53: 777-781 ။ [PubMed]
Breier တစ်ဦးက, Kestler L ကို, et al Adler, C, Elman ငါ Wiesenfeld N ကို, မဟော်ထတစ်ဦး။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် Dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးငျးကှာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;155: 1440-1442 ။ [PubMed]
Laakso တစ်ဦးက, Wallius အီး, Kajander J ကို, Bergman J ကို, Eskola အို Solin အို et al ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 904-910 ။ [PubMed]
Martinez: D, Orlowska: D, Narendran R ကို, Slifstein M က, လျူက F, Kumar က D:, et al ။ လူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် striatum နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအတွက် Dopamine အမျိုးအစား2/3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 275-278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cervenka S က, Gustavsson JP, Halldin ကို C, Farde အယ်လ်အစည်းအရုံး striatal နှင့် extrastriatal dopamine D2-receptor binding နှင့်လူမှုရေးလိုလားအကြား။ Neuroimage ။ 2010;50: 323-328 ။ [PubMed]
ဗန် ERP လေး, Miczek Ka ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူ, accumbal dopamine တိုးလာနှင့်ကြွက်များတွင် cortical serotonin လျော့နည်းသွားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 9320-9325 ။ [PubMed]
Tidey JW, Miczek Ka ။ တစ်ခု: လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုရွေးချယ် mesocorticolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1996;721: 140-149 ။ [PubMed]
MOS J ကို, ဗန် Valkenburg CF. ကြွက်ဦးနှောက်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ dopamine ဇီဝြဖစ်ပေါ်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်တိကျသောသက်ရောက်မှု။ neuroscience လက်တ။ 1979;15: 325-327 ။ [PubMed]
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau အို et al ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ် neuroscience ။ 2002;5: 169-174 ။ [PubMed]
မြွေ၏အေ Ohman နှင့်ရင်ဆိုင်နေရ: ကွောကျရှံ့ခွငျး၏စိတ်ပညာတခုတခုအပေါ်မှာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်။ Scand J ကို Psychol ။ 2009;50: 543-552 ။ [PubMed]
Furmark T က, Tillfors M က, Marteinsdottir ငါ Fischer H ကို, Pissiota တစ်ဦးက, Langstrom B, et al ။ citalopram သို့မဟုတ်သိမြင်-အပြုအမူကုထုံးနဲ့ကုသလူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အပြောင်းအလဲများကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;59: 425-433 ။ [PubMed]
Schneider က F, Weiss ဦး, Kessler ကို C, Muller-Gartner မှ HW, Posse S က, Salloum JB, et al ။ Subcortical လူမှုရေး phobia အတွက်ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများ differential ကိုဂန္ထဝင်အေးစက်၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;45: 863-871 ။ [PubMed]
Stein ကို MB, Goldin PR စနစ်, Sareen J ကို, Zorrilla LT, Brown က GG ။ generalized လူမှုရေး phobia အတွက်အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်ထီလေးစားပြုသောမျက်နှာများမှ activation amygdala တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;59: 1027-1034 ။ [PubMed]
Furmark T က, Henningsson S ကိုအယူခံ L ကို, Ahs က F, Linnman ကို C, Pissiota တစ်ဦးက, et al ။ amygdala တုန့်ပြန်အတွက် Over-ရောဂါ genotype: လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience ။ 2009;34: 30-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဗန် Ameringen M က, မန်စီနီကို C, Szechtman H ကို, Nahmias ကို C, Oakman JM, ခန်းမ GBC ။ generalized လူမှုရေး phobia တစ်ပေဒေါသသည်လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2004;132: 13-18 ။ [PubMed]
တိုနီဘလဲ K ကို Geraci M က, Devido J ကို, McCaffrey D ကို, ချန်, G, Vythilingam M က, et al ။ generalized လူမှုရေး phobia အတွက်ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသောထားသောရည်ညွှန်းခြီးမှမျးခွငျးမြားနှငျ့ဝေဖန်မှုများမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;65: 1176-1184 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
တိုနီဘလဲ KS, Geraci M က, Hollon N ကို, Otero က M, DeVido J ကို, ဘုနျးကွီးကို C, et al ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေး phobia အတွက်လူမှုစံအပြောင်းအလဲနဲ့: atypically (embarrassing) ရည်ရွယ်တဲ့လွန်ကျူးခြင်းအ ventromedial တိုကျရိုကျ cortex တုန့်ပြန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;167: 1526-1532 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goldin PR စနစ်, Manber T က, Hakimi S က, Canli T က, စုစုပေါင်း JJ ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ: လူမှုရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုစဉ်အတွင်းစိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်သိမြင်မှုစည်းမျဉ်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;66: 170-180 ။ [PubMed]
Sotres-Bayon က F ကာဣန CK, LeDoux je ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ဦးနှောက်ယန္တရားများ: prefrontal cortex ၏အလှူငွေအပေါ်သမိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;60: 329-336 ။ [PubMed]
Milad MR, Quirk GJ ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းဘို့ medial prefrontal cortex signal ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအာရုံခံ။ သဘာဝ။ 2002;420: 70-74 ။ [PubMed]
Frey ဦး, Schroeder H ကို, Matthies အိပ်ချ် Dopaminergic ရန်ကြွက် hippocampal ချပ်၏ CA1 ဒေသတွင်း၌ posttetanic LTP ၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုတားဆီး။ ဦးနှောက် Res ။ 1990;522: 69-75 ။ [PubMed]
Takahashi H ကို, Kato က M, Hayashi က M, Okubo Y ကို, Takano တစ်ဦးက, Ito က H ကို, et al ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို; အဆိုပါ hippocampus အတွက် dopamine D2 receptors နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဆက်ဆံရေး။ Neuroimage ။ 2007;34: 1643-1649 ။ [PubMed]
Umegaki H ကို, Munoz J ကို, Meyer RC, Spangler EL, Yoshimura J ကို, Ikari H ကို, et al ။ dopamine: D (2) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြွက်၏ ventral hippocampus အတွက်ရှုပ်ထွေးဝင်္သင်ယူမှုနှင့် acetylcholine လွှတ်ပေးရန်အတွက် receptors ။ neuroscience ။ 2001;103: 27-33 ။ [PubMed]
Takahashi H ကို, Kato က M, Takano H ကို, Arakawa R ကို, Okumura M က, Otsuka T က, et al ။ prefrontal နှင့် hippocampal dopamine: D (1) နှင့် D ကို (2) ၏ differential ပံ့ပိုးမှုများကိုလူ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် receptors ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 12032-12038 ။ [PubMed]
Aalto က S, Bruck တစ်ဦး, အိပျက M, Nagren K ကို Rinne Jo ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူသားမြားအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းတိုကျရိုကျနှင့်ယာယီ dopamine လွှတ်ပေးရန်: high-ဆှဖှေဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor ligand [11C] FLB 457 သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 2471-2477 ။ [PubMed]
Narendran R ကို, Frankle WG ကို, Mason ဆို NS, Rabiner EA ၏, ဂွန် RN, Searle GE, et al ။ Positron ထုတ်လွှတ် tomography လူ့ cortex အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ပုံရိပ်: မြင့်ဆှဖှေဲ့ dopamine D2 /3radiotracers [11C] FLB 457 တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် [11C] fallypride ။ synapses ။ 2009;63: 447-461 ။ [PubMed]
Montgomery AJ, Asselin MC, Farde L ကို, Grasby pm တွင်။ [(11) ကို C] FLB 457 ပေသုံးပြီး extrastriatal dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် methylphenidate-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 2006;27: 378-392 ။ [PubMed]
et al Aalto က S, Hirvonen J ကို, Kaasinen V ကို, Hagelberg N ကို, Kajander J ကို, Nagren K သည်။ extrastriatal dopamine D2 / D3 receptors အပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ: ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် [11C] FLB 457 နဲ့ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ပေလေ့လာမှု။ EUR J ကို Nucl Med Mol Imaging က။ 2009;36: 475-483 ။ [PubMed]
Okauchi T က, Suhara T က Maeda ဟာဂျေ, Kawabe K ကို Obayashi S က, endogenous dopamine ၏ဆူဇူကီး K. Effect endogenous dopamine အပေါ် extrastriated အပေါ် [(11) ကို C] FLB 457 ပေအားဖြင့်တိုင်းတာ binding ။ synapses ။ 2001;41: 87-95 ။ [PubMed]
blanc, G, Hervé D ကိုရှိမုန် H ကို, Lisoprawski တစ်ဦးက, Glowinski J ကို, Tassin JP ။ ရေရှည်အထီးကျန်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင် mesocortico-တိုကျရိုကျ dopaminergic အာရုံခံ၏ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်။ သဘာဝ။ 1980;284: 265-267 ။ [PubMed]
ဘိုးလင်း SL, Rowlett JK, Bardo MT ။ စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှု, dopamine ပေါင်းစပ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology ။ 1993;32: 885-893 ။ [PubMed]
Olsson H ကို, Halldin ကို C, PET သုံးပြီးလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ extrastriatal dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ဆှဖှေဲ့၏ Farde အယ်လ် Differentiation ။ Neuroimage ။ 2004;22: 794-803 ။ [PubMed]